Kpido: transcript video | Martech Zone
N'oge na-adịbeghị anya anyị gbasaa ndị otu anyị na ụlọ ọrụ anyị ka ha tinye onye na-ese ihe nkiri, Harrison Painter. Ọ bụ mpaghara anyị maara na anyị enweghị. Ọ bụ ezie na anyị na-ede ma na-eme vidio eserese dị ịtụnanya yana ịmepụta pọdkastị dị ukwuu, ịde blọgụ vidio anyị (vlog) adịghị adị. Vidiyo adịghị mfe. Ọnọdụ ọkụ, ogo vidiyo, yana ọdịyo siri ike ịme nke ọma. Anyi achoghi imeputa vidio nke nwere ike ma obu ghara inwe